Turkiga oo u aqoonsaday Golaha KMG Liibiya in ay iyagu yihiin kuwa dalkaasi ka taliya. – SBC
Turkiga oo u aqoonsaday Golaha KMG Liibiya in ay iyagu yihiin kuwa dalkaasi ka taliya.
Posted by editor on July 4, 2011 Comments
Dowlada Turkiga ayaa u aqoonsatay Golaha KMG Qaranka Liibiya in ay iyagu yihiin kuwa matala Shacabka dalkaasi liibiya,loogana baahan yahay xiligan Korneel Qadaafi in uu booska baneeyo.
Wasiirka Arimaha dibada Turkiga Ahmet Davutoglu ayaa sheegay in wakhtigan uu yahay xiligii uu tagi lahaa Qadaafi,shacabka Liibiyana ay talada dalkooda la wareegi lahaayeen.
Dowlada Turkigu waxaa bilihii aynu soo dhaafnay ay taageero dhaqaale siinaysay Kooxaha kacdoonka,iyadoona ugu deeqday dhaqaale kor u dhaafaya ilaa 300 Million oo doolar.
Wasiirka arimaha Dibada Turkiga Ahmet Davutoglu waxaa uu sheegay in ay la garab taagan yihiin Kooxaha kacdoonka taageero kasta oo ay u baahdaan ayna iyaga u aqoon san yihiin in ay yihiin kuwa ma tala shacabka dalkaasi Liibiya.
Afhayeen u hadlay kooxaha Mucaaradka oo lagu magacaabo Abdel Hafiz Ghoga ayaa goorsii horaysay waxaa uu sheegay In aanay marnaba aqbalayn soo jeedinta midowga Afrika ee ah in ay wadahadal la galaan Korneel Qadaafi.
Mustafa Abdul Jalil oo ah madaxa ugu sareeya xiligan golaha KMG qaranka Liibiya ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan in Qadaafi uu kusii nagaado Liibiya,hadii uu wareejiyo talada,ayna u ogolaanayaan in uu ka tagi karo ama ku noolaan karo dalka Liibiya.
Dowlada Turkiga ayaa qayb ka noqonaysa dowladaha fara ku tirska ah ee aqoonsaday kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeda Dowlada Korneel Mucamar Al qadaafi ee dalka Liibiya.